Orinasa sy mpanamboatra horonantsary plastika any Sina | Yongjie
Taratasy aluminium ankapobeny
Coil aluminium sy strip
Fitaovana fampiharana maivana ho an'ny fiara
Fampitaovana rafitra fampitana hafanana
Fitaovana fampiharana angovo vaovao
Fifandraisana sy fitaovana elektronika
Bataly Aluminium foil
Sarimihetsika plastika aluminium
Main firaka: 8021
Fampiasana vokatra: Kitapom-batsy
Tombony ho an'i Yongjie:
1.Misy rojom-panodinana aliminioma feno manomboka amin'ny ingot aluminium ka hatramin'ny vokatra vita, ary ny dingana rehetra manomboka amin'ny ingot aluminium ka hatramin'ny vokatra vita dia fehezina.
2. Amin'ny dingana voalohan'ny fampiroboroboana ny sarimihetsika plastika aliminioma dia namorona endrika mangatsiaka marobe, ary ny toetran'ny firaka 8021 dia takatra.
3.Ny vokatra sarimihetsika plastika vita amin'ny plastika dia ampidirina amin'ny fampiroboroboana vokatra vaovao, ary ananany fitaovana ampitaina any ivelany toy ny horonan-taratasy Alemanina sy Slovenia, kodiarana fitotoana nohafarana avy any Japon, ary ny fitiliana lavaka dia nampidirina avy any Korea Atsimo.
Fihodinana mafana-Fihodinana mangatsiaka-fametahana-fanadiovana-fanariana-fanoratana-famonosana-fonosana
Ny foza aluminium 8021 no singa manan-danja ampiasaina amin'ny fonosana bateria. Izy io dia manana opacity tsara sy porofon'ny hamandoana mahery & fanakanana. Ny foza vita amin'ny alimo 8021 dia tsy misy poizina ary tsy misy fofona. Ny firaka vita amin'ny alimoola 8021 dia ampiasaina betsaka ho fitaovana fonosana aorian'ny fitambarana, fanontana ary fametahana. Alloy 8021 dia azo zahana amin'ny faritra fandrefesana marobe araka ny takian'ny mpanjifa.
8021 Aluminium Foil Features: Ny volon'ny alimo 8021 dia lafo, maharitra, tsy misy poizina ary greaseproof. Ho fanampin'izany, manohitra ny fanafihana simika izy ary manome fiarovana tsara amin'ny herinaratra sy tsy andriamby. Ny foil mamorona mangatsiaka dia afaka manohitra tanteraka ny etona, ny oxygen miaraka amin'ny fahombiazan'ny sakana amin'ny fofona. Ny firaka alimina 8021 dia manome antoka ny fahombiazana tsara kokoa ho an'ireo fampiharana toy ny fonosana fanafody, fonosana elektronika, akorandriaka bateria ary izany rehetra izany dia mitaky fanatanterahana sakana.
Battery pack foil 8021 dia firaka noforonina tamin'ny foilina vita amin'ny alimina madio sy feno singa fanampiny. Matetika eo anelanelan'ny 0,035 sy 0,06 mm ny hateviny, ny foza vita amin'ny aluminium 8021 dia vokarina amin'ny sakany sy tanjaka maro.
Matetika ampiasaina amin'ny foza 8021 aliminioma dia misy H14, H18, H22, H24 ary O. Mill vita amin'ny aliminioma vita amin'ny aluminium toy ny foil de batterie, azo ampiasaina aminay ny foil fanafody.
Previous: Bataly Aluminium foil
Manaraka: Fampitaovana rafitra fampitana hafanana
Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny sehatra maro
Aeronautika sy astronautika
Herinaratra sy elektronika